भारतीय प्रधानमन्त्री दामोदारदास मोदीले यस्तो विधिबाट पूजा गरे ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार भारतीय प्रधानमन्त्री दामोदारदास मोदीले यस्तो विधिबाट पूजा गरे !
on: २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १२:१२ In: समाचारTags: No Comments
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीले आज जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरमा षोडशोपचार विधिबाट विशेष पूजाअर्चना गरे ।
मन्त्रको प्रधानता रहेको सो पूजा जानकी मन्दिरमा आउने विशिष्ट अतिथिलाई मात्र गराइने परम्परा छ । जानकी मन्दिरमा सो विधिबाट पूजा गर्ने भारतका प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदी पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् ।
जानकी मन्दिरलाई माता जानकीको निवासस्थल मानिएको छ । धार्मिक मान्यताअनुसार जानकी मन्दिरको प्रधान गर्भगृह माता जानकीको कोहवर छ जहाँ जानकी र राम शयन गर्छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी मन्दिर परिसरमा रहेको शालिग्राम मन्दिरमा पूजाअर्चना र अखण्ड सीताराम भजनमा स्तुति गरेका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जानकी मन्दिरमा महन्त रामतपेश्वर दास र सहायक महन्त रामरोशन दासले मैथिल संंस्कृतिअनुसार स्वागत गर्नुभएको थियो ।
२८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १२:१२